Madaxweyne Xasan Sheekh oo loogu baaqay inuu wadahadal la galo Shabaab. - Jowhar somali news leader
June 22 (Jowhar.com)- Hay’adda xasaradaha caalamka ee loo soo gaabiyo ICG ayaa faahfaahin ka bixisay dhibaatooyiinka ka dhashay dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabab, xilli dhanka kalena ay ku talisay hay’addani in wakhti xaadirkan ay lagama maarmaan tahay in Al-Shabab lagu dayo wadahadal.
Dagaalka daba dheeraaday ayay warbixintu sheegtay in uu galaaftay nolsaha dad badan islamarkana uu minja xaabinayo dib u dhiska Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ICG ay dowladda Soomaaliya kula talisay in waddooyiin kale loo maro hogaamiyayaasha Al-shabab si loo tijaabiyo suuragalnimada wadaxaajood lala galo.
ICG ayaa madaxwaynaha cusub ee Soomalaiya Xassan Sh Maxamuud ku boorisay in uu markan tijaabiyo wadaxaajood lala galo Alshaabab. iyadoo la xusay in ay jirto dood gudaha iyo dibadaba ah oo isa soo taraysa taasi oo ku saabsan in Alshabab militari ahaan oo kali ah aanay suurgal ahayn in lagaga adkaado.
Waxaa ay sidoo kale hay’addani farta ku fiiqday in Marna aysan jiri doonin waqti ku habboon oo Al-Shabab wadaxaajood lala galo, balse ay macno badan sameynayso in la isku dayo hadda intii la sugi lahaa waqti dheer, haddaba hore laga bilaabo.
Hay’dda ayaa sheegtay in madaxwayne Xasan Sh Maxamuud markii uu xilka u tartamayay uu ballan qaaday inuu dib u heshiisiin dhex dhigi doono Soomaalida gudaheeda, ICG ayaa xustay in su’aasha la is waydiin karo ay tahay in nabadaasi laga qeyb galiyo ama la gaarsiiyo kooxda Al-Shabaab.